उपत्यकामा एकै दिन थपिए १०२ संक्रमित ! सेयर गरौ « Nepal's number 1 Entertainment news portal
उपत्यकामा एकै दिन थपिए १०२ संक्रमित ! सेयर गरौ
Published :6August, 2020 1:22 pm
अस्पतालमा शय्या अभावले काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये १४ जनालाई घरमै राख्नुपरेको थियो । उनीहरूमध्ये केहीलाई बुधबार बिहान केएमसी अस्पताल दुवाकोट र कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पतालको आइसोलेसनमा राखियो । उपत्यकामा बुधबार १ सय २ जना संक्रमित थपिए । यीमध्ये अधिकांश उपत्यका बाहिरबाट आएकाहरू हुन् ।